Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta kulan ku yeeshay Muqdisho – SBC
Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta kulan ku yeeshay Muqdisho
Posted by Webmaster on October 14, 2012 Comments
Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta kulan isugu yimid gudaha Magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaana kulankoodu ahaa mid ay ugaga dooden qodobo muhiim ah.
Baarlamanka ayaa ka dooday arimo ku aadan Xeer hoosaadyada Baarlamanka si loo amba qaado howlaha baarlamanka iyadoo warbixino laga dhageysay gudiyo loosaaray kal hore in ay ka shaqeeyaan xeer hoosaadyada Baarlamanka.
Waxaa sidoo kale Baarlamanka ay maanta isla falan qeeyeen ansxiinta raiisul wasaaraha cusub ee iminka dalka ku magacaaban iyagoona ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu horyimaado si ay xildhibaanada baarlamanka ugu ansixiyaan.
Waxa ugu dambeyntii hadal uu halkaasi kajeediyay gudoomiyaha Baarlamanka Mr Jawaari uu ku dhawaaqay in labada baalin ee soo socota laga codsanayo raiisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid in uu ku yimaado Baarlamanka Soomaaliya .
Mudooyinkii ugu dambeeyay tan iyo intii lagu dhawaaqy raiisul wasaraha cusub, waxaa soo baxayay wararka sheegaya in raiisul wasaaraha maca xukuumada uu so magacaabayo si wadajir ah u hortagi doonaan Baarlamanka balse waxaa iminka lagu wadaa in raiisul wasaaraha marka hore uu hortago baarlamanka .